पदीय चुनौतीलाई अवसरमा परिणत गर्छुः सर्वेन्द्र खनाल
2074-12-29 / Source: onlinekhabar.com / 2.2K 0
लोकसेवा तयारी मोबाइलबाटै गर्न लोकसेवा प्लस Subscribe गर्नुहोस
* All prices are exclusive of any taxes.
3 Days (Rs. 10)
15 Days (Rs. 25)
One Month (Rs. 80)
One Year (Rs. 300)
* When Renewal in on, the payment will be deducted from the above number inarecurring manner.
२९ चैत, काठमाडौं । नेपाल प्रहरीका नवनियुक्त महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनालले पदीय चुनौतिलाई अवसरमा परिणत गर्ने बताएका छन् । उनले सशस्त्र प्रहरी बलसँग सहकार्य गरेर अघि बढ्ने प्रतिवद्धता पनि जनाए ।
बिहीबार बिहान गृहमन्त्रालयमा दर्ज्यानी चिह्न ग्रहण कार्यक्रममा खनालले लिखित मन्तव्य संक्षिप्त रुपमा राखेका थिए । पदीय जिम्मेवारीसँगै चुनौति पनि रहेको भन्दै उनले यसलाई आफूले अवसरको रुपमा लिएको बताए ।
आफूसँगै दर्ज्यानी चिह्न ग्रहण गरेका सशस्त्र प्रहरीका महानिरीक्षक शैलेन्द्र खनाललाई बधाइ दिँदै सर्वेन्द्रले सहकार्य गरेर अघि बढ्ने बताए ।
उनले संगठनको प्रभावकारीता बढाउन वृत्ति विकासमा जोड दिने र प्रहरी संगठनको क्रियाकलापलाई पारदर्शी तथा जवाफदेही बनाउने बताए ।
गृहमन्त्रालयको ८२ बुँदे कार्ययोजनालाई पालना गर्ने प्रतिवद्धता खनालले जनाए ।
सशस्त्र प्रहरीका महानिरीक्षक शैलेन्द्र खनालले ऐन नियमअनुसार इमान्दारीतापूर्वक काम गर्ने र चेन अफ कमाण्ड कायम गर्ने बताए । उनले उपलब्ध स्रोत साधनको परिचालन गरेर सशस्त्रको प्रहरी बललाई आधुनिकीकरण गर्ने पनि बताए ।
खनालले आतंककारी गतिविधि र समाजमा खलल पुर्‍याउने कामलाई रोक्नका लागि क्रियाशील हुने बताए । त्यसका लागि आवश्यक नीति नियम निर्माणमा जोड दिने पनि उनले बताए ।
सशस्त्र प्रहरीका महानिरीक्षक खनालले पनि गृहमन्त्रालयको ८२ बुँदे कार्ययोजनालाई अनुसरण गर्ने बताए ।
गृह मन्त्रालयका सचिव प्रेम कुमार राईले ६ महिना वा एक वर्ष वा मासिक कार्ययोजना बनाएर काम गर्न सुझाव दिए । उनले कर्मचारीहरुको वृत्ति विकासमा ध्यान दिन पनि सुझाव दिए ।
लोकसेवाले लामो अन्तरालपछि बहुप्रतिक्षित उपसचिवको नतिजा प्रकासन गरेको छ
लोकसेवाले लामो अन्तरालपछि बहुप्रतिक्षित उपसचिवको नतिजा प्रकासन गरेको छ सामान्य प्रसाशन राजश्व लेखा
प्रहरी जवानमा जागिरका लागि भर्ना खुल्यो, ५ हजार भन्दा धेरै भर्ना लिइने
काठमाडौँ । नेपाल प्रहरीले पाँच हजार भन्दा बढी नयाँ प्रहरी भर्ना गर्ने भएको छ । प्रहरी जवान पदका लागि आज विज्ञापन निकालेर कार्यालयले खुला प्रतियोगिताद्वारा समावेशी प्रावधानअनुसार ५ हजार २ सय २७ जना नयाँ प्रहरी...
सहसचिव र उपसचिवका लागि विज्ञापन खुल्यो
काठमाडौँ । लोक सेवा आयोगले ठुलो सङ्ख्यामा सहसचिव र उपसचिव पदका लागि विज्ञापन खुलाएको छ । आयोगले बुधवार(आज) सूचना प्रकाशित गर्दै १८२ सहसचिव र ४५६ उपसचिव पदका लागि विज्ञापन खुलाएको हो । आयोगका...
कोरोना संक्रमण भएकै अवस्थामा परीक्षार्थीले लोक सेवाको परीक्षा दिन नपाउने (मापदण्डसहित)
काठमाडौं । कोरोना संक्रमण भएकै अवस्थामा परीक्षार्थीले लोक सेवाको परीक्षा दिन नपाउने भएका छन् । लोक सेवा आयोगले संक्रमणको विशेष अवस्थामा परीक्षा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ ल्याएको छ। उक्त...
लोक सेवाले निकाल्यो नयाँ वार्षिक कार्यतालिका, कुन पदको विज्ञापन कहिले खुल्छ ?
क सेवा आयोगले सरकारी निकायका विभिन्न पदपूर्तिका लागि विज्ञापन गर्ने लगायत कामकारवाहीको वार्षिक कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको छ । बुधवार गोरखापत्र दैनिकमा सूचना प्रकाशित गर्दै लोक सेवाले निजामती सेवा, सुरक्षा र...
शाखा अधिकृत नमुना प्रश्नोत्तर ४२
खरिदार नमुना प्रश्नोत्तर २८ (प्रथम पत्र )
नायब सुब्बा / प्रथम पत्र: नमुना सेट - ५४
Lab Assistant Model Set 1
स्थानीय तह अन्तर्गत कम्प्युटर अपरेटरको लागि २०७६/४/२० मा सोधिएका प्रश्नहरु
त्यो कुन चिज हो केटा ले 12महिना मा लगाउँछ भने केटी ले बर्श मा यक चोटि लगाउँछ
on 02 Nov, 2017
civil sub overseer Model Question
on 05 Sep, 2017
on 25 Jul, 2018
विश्वमा कति वटा देश रहेका छन?
on 02 Jun, 2018
Browse More Websites
Hamro Doctor News
© 2014 - 2021 LokSewa Nepal